Sida loo Go'aaminta Ilmahaaga Learning Style
Hababka Barashada kaalin muhiim ah in sida kids baran iyo sida macalimiinta baro. Tan iyo carruurta - gaar ahaan kuwa barbaarinta da'da iyo hoose - waxaa ugu horayn baray by waalidkood, waxa kale oo muhiim ah in aan ogaado sida ugu badan ee aan awoodno ku saabsan hanaan waxbarasho carruurteenna.
Sida laga soo xigtay website-ka Oxford Tixraaca, Hababka barashada tixraac "siyaabo gaar ah oo shaqsiyaadka ku lug leh waxbarashada."
Hababka Barashada sidoo kale daboolaa la Sirdoonka badan Gardner ayaa. Go'aaminta mid style waxbarashada waxay kaloo ka caawisaa ardayda da'da ah oo dhan aan loo ogaado sida ay u weerari doonaan iyo 'khawano' casharo loogu talagalay haynta wanaagsan. "
Raadi qaab waxbarasho ee ilmahaaga
Hase yeshe, waxa dad badan u malayn kartaa, mid ka mid ma aha baahan noqon macallin shahaado ama xirfadle tababaran si loo ogaado qaabka waxbarasho ee ilmaha.
Isgaarsiinta waa furaha, eegayn haddii aad tahay waalidka ama macallinka ilmahaaga in.
Sayidka, waxaa muhiim ah in waalidku waqti iyo carruurtooda, oo aad hesho si ay u ogaadaan sida ugu badan ee ay awoodaan.
Waxa ugu fiican ee waalidka samayn kartaa waa in gadaashiisa kaga tegi doono ee la soo dhaafay fikradaha ku saabsan waxbarashada iyo diiradda on ilmaha.
"Waalidiinta inta badan leeyihiin fikrad eexanaya in ilmaha waa in la fadhiya miiska a, xasilloon, sans music, iwm. [si ay u bartaan]. Tani ma aha oo kaliya deegaanka waxbarasho oo waad garan doontaa waxa keliya oo la shaqeeya ilmahaaga haddii aad isaga si fiican u ogahay. "
bulk ee go'aaminta style waxbarashada ilmaha ee runtii waa on dhawrid.
Tusaale ahaan, haddii aad daawato filim, waad sugi kartaa oo eega kii arko ee animation iyo style sawirka (smart muuqaal ah), kuwaas oo xusa soundtrack ah (maqalka smart), oo ah kan loo ugu saameeyeen ee dareen iyo anshaxa ah (intrapersonal smart)! Natiijadan ayaa waxa ay had iyo jeer waa joogto!
Intaa waxaa dheer, I believe that all kids are tactile learners. Kids u leeyihiin in ay leeyihiin wax la taaban karo inay taabtaan iyo hay si ay u si buuxda u bartaan, sidaas hadlaan dhoobo, manipulatives, iwm. Dhab ahaantii, hanaan waxbarasho oo sida caadiga ah ku yimaadaan isku-dar ah laba Hababka. "
Halkan waxaa ku qoran dhawr waxyaalood oo aad samayn karto:
1. Hel in la ogaado in ilmahaagu
Haddii aad rabto in aad si loo ogaado qaabka waxbarasho ee ilmahaaga, aad u baahan tahay si aad u hesho in la ogaado isaga.
Ka qaadan korsocod ah waxa uu ku daawanaya, ajiibaa, and reads. Talk to him about his friends, meelaha uu jecel yahay inuu u socday, iwm. Waxaad la yaabi doonaa info ee aad heli doontaa - oo lagu daray lagala kulmo in aad ka dhigi doonaa dhaw.
Inkastoo dadka qaarkood ayaa dhihi kara in caruurta ku yeelan karto oo keliya mid ka mid ah saddex ama afar hanaan waxbarasho aasaasi ah (muuqaal ama image-smart, maqalka ama ereyga-smart, taabashada / kinesthetic ama jidhka-smart, macquul ah ama tiro-smart), runta waa in carruurta ku yeelan kartaa isku-dar ah Hababka.
Mararka qaarkood kids qas ilaa Hababka sida ay waxa ay tahay barashada. Waxay noqon karaan maqalka, waayo, waxyaalaha qaarkood iyo muuqaal ah ee dadka kale, ama labadaba.
2. Samee ugu baxay style waxbarasho ee ilmahaaga
Marka aad aragto sida ilmahaagu arko shaqada, fahmaa waxa ku dhacey Gaararkiisa, aad u buuxsan kartaa by dejinta deegaanka jirka iyo temporal waxbarasho. Tusaale ahaan, haddii aad dareento in ilmahaagu si fiican u shaqaysa music, sababta uma oggolaan inuu wax la samaacado on baran (haddii aad rabto in aad guriga ku xasilloon, in uu yahay).
Halkan waxaa ku qoran tusaale ka mid ah sida ay u la macaamilaan noocyada kala duwan ee kuwa waxbaranaya:
Waayo, bartaha muuqaal ah, wax soo saarka kasta oo had iyo jeer iman lahaa sawir ah. Warbixin la soo bandhigay lahaa qaab jaantuska a.
Waayo, bartaha maqalka, waxay heli lahaa songs xiran casharka. YoutTube ahaa khayraadka weyn qoyskooda ka dibna.
Waayo, bartaha dareen, cashar kasta lagu qabto lahaa sheeko moral si fikradda racfaan ka qaadan doono inuu iyada saamayn.
3. Dheellitir sida
Waxaa laga yaabaa in geeddi-socodka dheer, maxaa yeelay, aad leedahay si ay u tijaabiso oo waxbarasho style ilmahaagu leeyahay. Waxa ay noqon doontaa tijaabo iyo baadi bilowga.
Sida ilmahaagu sii koro, style waxbarashada iyada aad u badala, si aad u leeyihiin in ay sidoo kale noqon furan yahay isbedel walbaba style umeerin /.
4. Majeero (iyo isticmaalka) Hababka kale
Ha ka baqin inay sahamiyaan Hababka kale ee waxbarasho, xataa haddii aad horay u aqoonsaday style u gaar ah carruurta.
Ogaanshaha style waxbarasho ee ilmaha waa in aan joojiyo waalidka ka sahaminta habka ugu yaraan doorbidayso. Taasi hadda noqonayaa aad boos uu horumar, sidaas Hababka oo dhan in la adeegsadaa kartaa waxbarasho oo dheeraad ah guud.
kids faraxsanaan, aad sii faraxsanaan
Ugu dambayntii, og style waxbarashada ilmahaaga sida xaqiiqada ah waxay noqon kartaa mid faa'iido ma ahan oo keliya in aad, waalid ahaan, laakiin isaga ama iyada iyo sidoo in ay. Habkan, waxbarashada noqdo badan oo dhan fudud - taas oo ka dhigaysa carruurta faraxsanaan iyo waalidiinta faraxsanaan.
Bar si Ilmahaaga…